Omume Brain - na ntakịrị ihe gbasara Doug | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 12, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Otu n’ime ihe kacha masị m mma gbasara ntanetị bụ na ọ gafere ụzọ dị n’etiti nka na mmemme. N’afọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị, abụ m onye omenkà na-anụ ọkụ n’obi… na-ese ihe mgbe ụfọdụ. N’oge m gbara dimkpa, m gụrụ akwụkwọ kọleji n’ụlọ ọrụ a na-akpọ Industrial Drafting. Ndepụta akwụkwọ ahụ wepụụrụ m nnwere onwe nke pensụl m, mana enwere m mmasị na nkenke ederede. Agara m klaasị ahụ mana anaghị m ewere ya na kọleji.
Kama m sonyeere ndị agha mmiri wee bụrụ onye ọkụ eletrik. O juru ọtụtụ ndị folks anya na ndụ m gara aga dugara m ahịa, ire ahịa data, Web Design, na Web Application Design… mana ọ bụ ihe e kere eke. Echiche na ịdọ aka ná ntị achọrọ na-arụ ọrụ na igwe eletriki na igwe eletrik nyere m ụfọdụ ezigbo arụmụka na nchọpụta nsogbu. Nke a mechara duga m ịga mahadum maka Teknụzụ Teknụzụ. N'oge ahụ, amalitere m ịchọpụta nsogbu na imepụta usoro mgbagha n'ubu na PLC's (Programmable Logic Controllers). Nke ahụ dugara na PC mwepụta, Mmemme, Njikọ Ntanetị na Njikọ data.
Enwere m ịhụnanya na teknụzụ na ụlọ ọrụ m nọ na… Industrylọ Ọrụ Akwụkwọ Akụkọ. Achọrọ m ịkwaga si Production akụkụ nke azụmahịa na Marketing na Advertising n'akụkụ nke azụmahịa… ma ozugbo mmadụ na-ahụ gị na a-acha anụnụ anụnụ edo, ọ bụ ike na-a Marketing ọrụ. Ya mere… Ejuru m ịnyịnya na ụgbọ ala ndị ahụ gbagara ụmụ m West, na-arụ ọrụ maka ụlọ ahịa na-ere data nke rụziri, wuo ma tinye ya n'ụlọ nkwakọba data Data na throughoutlọ Ahịa akwụkwọ akụkọ. Ọ bụ ọrụ na-adọrọ mmasị. Mụ na ụfọdụ n'ime ndị kasị ibu akwụkwọ akụkọ na-arụ ọrụ na onwe mepụtara ụfọdụ oké ngwa na ndị ụlọ ọrụ.
Anọgidere m ụlọ ọrụ ahụ ruo ihe karịrị afọ iri ma meere onwe m nke ọma. Ọbụna a họpụtara m na ụlọ ọrụ ahụ dịka otu n'ime 20 kacha elu n'okpuru 40. Edere m akwụkwọ maka ọtụtụ oge ụlọ ọrụ ma tinye ahụmịhe m na-arụ ọrụ, na-ewulite atụmatụ Database Marketing pụtara ìhè maka akwụkwọ akụkọ mpaghara. Ngbanwe nke njikwa ebe ahụ mere ka ekwusighi ike na nchekwa data nchekwa. Akwụkwọ akụkọ ndị ụlọ ọrụ na-ebuputa akwụkwọ akụkọ n'ime afọ iri m, yabụ na azụmaahịa azụmaahịa abụghị ihe ị nwere ike iji na akwụkwọ mpaghara. Emechara m kpebie ịhapụ akwụkwọ akụkọ ahụ, na ụlọ ọrụ ahụ. Nke ahụ bụ nsogbu siri ike. O di nwute, enwetara m obere uzo. 🙂
Afọ na-esote m nọrọ na-enyere ụlọ ọrụ ndị ọzọ aka iwulite mmemme ha ma m mechara rute nnukwu egwu Kpọmkwem Ngwaọrụ. Ọ bụ ụlọ ọrụ dị egwu, otu ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa na United States. Ha nwere ngwaahịa di nma ma a mara m aka ugbua ka m gaa n’ihu ime ka ọ ka mma.
Agbanyeghị, ezughị ezu. Obi ka na-atọ m ụtọ inyere Indianapolis Colts aka, na Indianapolis Chamber of Commerce, nnabata na imepụta ọtụtụ saịtị maka ndị enyi na ndị ọrụ ibe, na-ekere òkè na mpaghara ahịa Ihe omume, yana ịnagide ihe ịma aka ọhụrụ. Enyere m aka ịmalite M Họrọ Indy!, A ahịhịa-mgbọrọgwụ saịtị ebe folks nwere ike ịkọ ihe mere ha ji ahọrọ Indianapolis. Ọ bụ saịtị na-enweta ike. M na-arụ ọrụ na ịmalite azụmahịa nke m, Compendium Software, ya na onye ọzọ na ebe m na-etinye blọgụ m, teknụzụ, na ahụmịhe ahịa m ịrụ ọrụ. M hụrụ n'anya na-arụ ọrụ a ngwa ngwa na-ewe oké iwe ijeụkwụ na m hụrụ n'anya na-arụ ọrụ na ndị nwere 'nwere ike ime' àgwà.
Ọ na-atọ m ụtọ iji 'ụbụrụ aka ekpe' m rụọ ụlọ iji gosipụta ihe osise na iji ihe osise eme ihe. Ọ na-ewe obere ihe okike. N’abalị a, arụrụ m ọrụ n’egosi maka otu ndị obodo, Rok Hollywood. Nnyinasosɛm a ebetumi aboa wo ma woatu mpɔn kɛse saa no. M ga-eleghị anya, redo ya a ugboro ole na ole dabere na nzaghachi ha… ma dị ka ị na-ahụ, M na-ekpori ndụ:
Ihe m na-ekwu bụ na m dị afọ iri atọ na asatọ ma amaghị ihe m chọrọ ịbụ mgbe m toro! Amaara m na m maara nke ọma ịchọta azịza teknụzụ maka nsogbu ndị siri ike, na ịkụziri ndị mmadụ ya. Enwere m agụụ na-agụsi ike maka nkà na ụzụ. Enweghị m ndidi maka ndị na-eme ngọpụ, mana enwere m mmasị inyere ndị na-arịọ maka enyemaka aka. O nweghị ihe na-eme m afọ ojuju karịa ịmụmụ ọnụ ọchị nke onye ahịa.
Abụ m Eze nke Trades niile (esi m na Jack pụta) mana m ka na-nwekwa onye ọ bụla. Enweghị m ike ịnagide ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọkachasị n'ọfịs. Achọghị m ịrụ ọrụ n’ihe na-enweghị ihe mgbaru ọsọ. M kpọrọ asị nzukọ ebe anyị na-ezukọ na-enweghị ihe mgbaru ọsọ (M na-egosi mbubreyo na-eweta m PDA otú m nwere ike ime email). Ọ na-amasị m ịrụ ọrụ n'oge… oge m na-arụpụta ihe na-adịkarị n'etiti 10PM na etiti abalị. Ọ na-amasị m ịkụ ụra ugboro abụọ n'ụtụtụ.
Ihe a niile na abụ m naanị nna! Oge mụ na ụmụ m dị egwu. Anyị ka na-ahụ ihe nkiri mgbe anyị nwere ike ma anyị na-anọkọ ọnụ. Mymụ m abụọ dịkwa egwu. Oh, M na-atụ anya m na mbụ 'kọfị ụbọchị' na ezi a mgbe a izu ụka… nke ahụ bụ a akụkụ nke ụbụrụ m na m na-eji na ezi a mgbe mere ka m jisie!
Ezuola m! Oge na-ehi ụra.
Sep 13, 2006 na 5:21 PM
Abụ m naanị otu nna maka ihe ka ukwuu n'oge ụmụaka nwoke ndị tọrọ m. Nke ahụ bụ akụkụ kachasị njọ banyere ịgba alụkwaghịm - anaghị ahụ ụmụ m nwoke ogologo oge. Ugbu a ha niile etolitela, m na-ahụkwa ha karịa. Jiri oge kpọrọ ihe.
Sep 13, 2006 na 5:27 PM
Mụ na ha nwere ọtụtụ oge, Sterling. Enwere m ikike nke ụmụaka. Otu n'ime ihe mere m ji họrọ etiti ọdịda anyanwụ bụ ka ha wee nwee ike ịhụkwu mama ha, onye lụgharịrị nwunye ma biri na Louisville. Amaghị m ihe m gaara eme ma e wezụga ha!
Ekwenyere m ikwu: Alụkwaghịm. Ọ jọgburu onye ọ bụla metụtara.